अहिलेको नागरिक दायित्व - गजु Real - साप्ताहिक
अहिलेको नागरिक दायित्व
आश्विन १७, २०७२
अहिलेको युगमा इन्धन प्राथमिक आवश्यकता हो । इन्धनको अभावमा देश अशान्त हुन्छ, कमजोर बन्छ र थला पर्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले गम्भीर दायित्वबोध गर्नुपर्ने गजुरियल ठम्याइ छ । अहिलेको संकट थोरै हाम्रा कारण र धेरैचाहिं छिमेकीका कारणले आएको हो । अभावको यो अवस्थाको सामना गर्न नागरिक दायित्व के–के हुन सक्छ त ?
थाहा भएकै कुरा हो, इन्धन नभएपछि गाडी चल्दैनन् । गाडी नचलेपछि अत्यावश्यक सामग्री आउँदैनन् । तिनको अभावमा जीवन चलाउन अप्ठेरो हुन्छ । खाद्य सामग्री नहुँदा भोकले सताउँछ । भोक लागेपछि रिस उठ्छ । रिसको सुरमा जे पनि हुन सक्छ । हो, यही अवस्थामा हामीले संयमित निर्णय, संयमित बोली र संयमित काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र अन्यन्तै जटिल मोडमा छ । यो अवस्था कसको कारणले आयो भन्ने विवादतिर लाग्ने बेला यो होइन, त्यसको विश्लेषण देश पूर्ण रूपमा निको भएपछि गरौंला । अहिले समस्याको सामना कसरी गर्ने भन्ने हो । पेट्रोल नपाएको झोक सरकारमाथि खन्याएर समस्याको समाधान निस्कँदैन । ग्याँस नपाएको आक्रोश नेतामाथि खन्याउने बेला पनि यो होइन भन्ने गजुरियल ठम्याइ छ ।
राष्ट्रिय विपत्तिमा प्रत्येक जनता जननेता हुन्, हरेक सचेत नागरिक जनसरकार हुन् । यस्तो अवस्थामा अरूलाई यसो गर्नोस्, उसो गर्नोस् भनेर सिकाउन सजिलो छ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने ठम्याउन अप्ठ्यारो । के गर्दा ठीक हुन्छ, के गर्दा गलत ? भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने बेला हो यो । गजुरियल विश्लेषकले अब के गर्छ भन्ने कुराको घोषणा यस प्रकार छ :
इन्धन अभावका कारण स्कुलको गाडी आउन सकेन भने म आफ्नोमा इन्धन हुन्जेल आफैं बच्चालाई स्कुल पुर्‍याउँछु । आफ्नो सकिएपछि सार्वजानिक यातायात प्रयोग गर्नेछु । ती पनि चल्न छाडेपछि पैदल लाने–ल्याउने काम गर्नेछु । पैदल हिँड्न गाह्रो भएपछि घरमै कोर्स पढाउन सहयोग गर्नेछु भन्ने गजुरियल योजना छ ।
घरमा ग्याँस सकिन लागेको छ । के गर्ने होला ? यो अवस्था गजुरियल आह्वान यस्तो छ– दुई छाक खाना एकैपटक तयार गरौं । बिहान भात खाऔं, बेलुका त्यसैलाई फ्राइड राइस बनाऔं । दाल दुई छाकका लगि एकैपटक तयार गरौं । सधैं भात नै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाहीं गोलभेंडाको अचारसँग रोटी ग्रहण गरौं । हप्तामा एक–दुई छाक चिउरा खाँदा पनि केही फरक पर्दैन । पानी उमाल्नुभन्दा शुद्धीकरण गर्ने औषधीको प्रयोग वा प्राकृतिक उपाय अवलम्बन गर्दा पनि इन्धनको बचत हुन्छ भन्ने गजुरियल ठम्याइ छ ।
आफ्नोमा सकियो भने के गर्ने होला फेरि ? त्यस्तो अवस्थामा ऐंचो–पैंचोको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यो नेपालीहरूको सुन्दर पहिचान हो । नुन सकियो भने छिमेकीसँग पैंचो मागौं । आफ्नो चिनी छिमेकीलाई पैचो दिउँm । पैंचो भीख होइन, मित्रताको उत्कृष्ट रूप हो । ऐंचो–पैंचोले बिग्रिएको सम्बन्धलाई सपार्ने, सुमधुर बनाउने काम गर्छ भन्ने गजुरियल ठम्याइ छ ।
बन्दैबन्दका क्रममा हिन्दी भाषाका च्यानल पनि बन्द भएपछि गृहिणीहरूलाई पट्यार लाग्न सक्छ । दिन बिताउन कठिन हुन सक्छ । यस्तो बेलाको उपयोग सकारात्मक हिसाबले गरौं । राम्रा किताब पढौं । करेसाबारीलाई समय दिऔं । नेपालकै समाचार, चलचित्र तथा सिरियलहरू हेरौं । बलिउड र हलिउडको सैर गर्ने हाम्रो मस्तिष्कलाई नेपाली संस्कृतितिर फर्काउने उत्तम अवसर पनि यही हो भन्ने गजुरीयल ठम्याइ छ ।
मोटरसाइकलमा पेट्रोल सकियो वा सार्जजनिक यातायातका साधन पाइएन भने जुलुस निकाल्नतिर नलागौं । समयमै विकल्पतिर लागौं । समयमै सुतौं, चाँडै उठौं । काममा जानु छ, अफिस पुग्नु छ भने एक घण्टा चाँडै हिँडौं । ढिलो भएको दिन पाइलाको गति अलि बढाऔं । स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने, समयको सदुपयोग पनि हुने भएकाले पैदल हिंड्ने बानी बसाउनुपर्ने गजुरियल ठम्याइ छ ।
बिर्सिएका साथीहरू खोजौं । खोज्न आउनेसँग मित्रता गाँसौं । साथीसँग इन्धन भए तपाईंलाई ड्रप गरिदिन्छन् । तपाईंसँग भए साथीलाई पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ । दुवैसँग नभए सँगसँगै आउजाउ गर्न सकिन्छ । बाटो पनि काटिने, दोस्ती पनि गहिरो हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा मित्रतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने गजुरियल ठम्याइ छ ।
प्रकाशित :आश्विन १७, २०७२
भोली प्रदर्शित हुने चलचित्र नागरिक (ट्रेलर सहित)
नागरिकको ट्रेलर सार्वजनिक
के मानिसको दिमागमा सम्भावित विध्वंसको पूर्वसंकेत आउँछ ? चैत्र २५, २०७५
होली पर्वभन्दा खतरा भोली पर्व चैत्र ६, २०७५
गजुरेल ज्योतिषका भविष्यवाणी माघ १७, २०७५